Shakhsiyaadka diimaha ee ugu hadal haynta badnaa 2020 | Berberanews.com
Home Qubanaha Shakhsiyaadka diimaha ee ugu hadal haynta badnaa 2020
Shakhsiyaadka diimaha ee ugu hadal haynta badnaa 2020
Inkasta oo la hakiyey isku imaanshiiyaha goobaha cibaadada ee dunida fayraska korona awgii, hadana dadku si caadi ah ayay ugu cibaadaysanayeen meelo badan oo dunida ah.
Waxa se jirta in shakhsiyaad diineed ay qaateen door fidin karayey cudurka korona, halka kuwo kalena muuqaallo u qaadan waa ah oo laga duubay lagu faafiyey baraha bulshada laga duubay.
Halkan kaga bogo shakhsiyaadka diineed ee hadal hayntoodu aadka ugu jirtay wararka dunida sannadkan dhamaanaya ee 2020.
Hogaamiyahan diineed ee reer Kuuriyada Koonfureed wuxuu noqday shakhsiyad la hadal hayo, ka dib markii ururka diineed ee uu madaxda u yahay goobahooda cibaadadu noqdeen meelo uu ku fiday oo ka faafo fayraska korona bishii Maarij 2020.
Lee Man-hee wuxuu madax ka hayay kaniisadda la yidhaa Shintshunji oo macanaheedu yahay ‘cirka iyo dhulka cusub’ waxaanay dadka isaga taabacsani u aaminsan yihiin inuu yahay Nebi lagu sii sheegay cutubka John ee Baybalka. Waxaanay sidoo kale aaminsanyihiin in ay iyaga oo keli ahi yihiin dadka jannada geli doona.
Xukuumadda Kuuriyada Koonfureed ayaa sheegtay in Lee Man-hee ka qariyey shaqaalaha caafimaadka dad uu ku dhacay fayrasku oo ka mid ah dadka taabacsan, arintaasina ay keentay in fayrasku si aad ah ugu fido dalka. Hase yeeshee kaniisaddiisa ayaa eeddaas beenisay, waxaanay sheegtay in uu doonayey inuu qariyo xogta shakhsiga ah ee xubnahaas oo aanu doonayn in lagu kaydiyo website-yada loogu talo galay in lagula socdo fiditaanka fayraska.
Bishii Ogost ayaa baadarigaa xabsiga loo taxaabay, waxaana lagu soo oogay dacwad ah inuu qariyey dad fayrasku ku dhacay oo la karantiimayn kari lahaa. Sidoo kale waxa dad badan oo ka mid ah kuwa taabacsan kaniisaddiisa lagu xidhxidhay Kuuriya iyo Singapore.
Magaca baadariyaddan Maraykanka ahi wuxuu aad caan uga noqday dunida bishii la soo dhaafay, waxaanay ka mid noqotay dadka caanka ah ee dunida oo dhan laga yaqaan.
Waxa aad loogu bartay muuqaal lagu baahiyey baraha bulshada ee internet-ka oo muujiyana iyada oo ku ducaynaysa erayo aan la fahmayn oo ‘malaa’iig u yeedhaysa’ si ay Donald Trump ugu gargaaraan oo ugu guulaysto doorashadii madaxtinimada ee dalka Maraykanka ka dhacday.
Paula White waxa loo magacaabay sannadkii 2019 la taliyaha caqiiqada ee Aqalka Cad, hase yeeshee intaa ka hor muddo dheer ayey Trump is yaqaaneen, waxaanay ka qayb gashay dhaarintiisii markii uu xilka la wareegayey 2016.
Cali Arbaash oo ah muftiga guud ee dalka Turkiga ayaa khudbaddii ugu horraysay ee Jime ee uu ka jeediyey masaajidka Aaya Soofiya bishii Juulaay, dhawr todobaad uun ka dib markii uu soo baxay qaraarkii [matxafkaa] masaajidkii uu ahaan jiray loogu celiyey, ayaa isaga oo sita seeftii Maxamed Al-faatix minbarka masaajidka fuulay.
Sidaas ayaanu borofisoorkan jaamacadda wax ka dhiga isla markaana ah caalimka diinta ee ah muftiga dalkaas tan iyo 2017 uu ku noqday shakhsiyad ay dadku ku kala aragti duwanaadeed oo qaarkood mawqifkiisaa taageereen kuwo kalena dhaliileen.
Qaarkood ayaa u arkayey in Arbaash seeftaa la fuulo minbarku in ay ahayd talaabo uu ku muujinayey summada Islaamnimo iyo ta qoomiyadeed ee Turkiga, halka kuwo kalena u arkeen in ay ahayd fariin siyaasadeed oo ku aroorta sooyaalkii guulaha lahaa ee Saldanadii Cismaaniyiinta, iyo sidoo kale inuu dunida xasuusiyo taariikhda furashadii Istanbul.
Baba Sheekh Xijji Khuurtuu Ismaaciil
Sannadkan waxa Aysiidiyiinta Ciraaq ka geeriyooday shakhsiyad door muhiima oo taariikheed soo qaatay. Waana Baba Sheekh Xajji Khuurtuu Ismaacii oo horaantii Oktoobar geeriyooday isaga oo 87 jir ah.
Baba Sheekh waa magac uu leeyahay hogaamiyaha diineed ee ugu sarreeya Aysiidiyiinta, waxaanu Xijji Khuurtuu Ismaaciil xilkaa qabtay sannadkii 2007 geeridiisii ka dib na waxa la doortay Sheekh Cali Ilyaas.
Xijji Ismaaciil wuxuu xilka qabtay iyada oo duruufo adagi haystaan Aysiidiyiinta waxaana la sheegaa inuu saamayn weyn ku lahaa bulshada Aysiidiyiinta, gaar ahaan wixii ka dambeeyey xasuuqii ka dhacay Jabal Sinjaar sannadkii 2014.
Xijji wuxuu dadaal u galay inuu soo celiyo haweenkii Aysiidiyiinta ahaa ee ay af-duubatay kooxda Daacish oo ay ku soo noqdaan qoysaskoodii, waxaanu u dhisay rag Aysiidiyiin ah.
Intuu uu hayey xilka hogaamiyaha diineed ee Aysiidiyiinta, Xijji wuxuu la kulmay hogaamiyeyaal badan oo diineed oo dunida oo dhan ah oo uu ku jiro Pope-kii hore ee Vatican-ka Benedict XVI. Sidoo kale wuxuu ahaa dadkii ugu codka dheeraa ee ku baaqi jiray in ay diimaha oo dhami midoobaan oo ay dulqaad kuwada jiraan.
Sannadkan dhamaanaya todobaad keliya wararka dunida kama uu maqnayn war khuseeya Pope Francis oo waxaba la odhan karaa siyaasiyiinta ayaabu kaga badnaa magaciisu wararka.
Hogaamiyaha kaniisadda Kaatoligga ah aad baa looga ixtiraamaa dunida waxaana loo arkaa inuu yahay qof u heelan ka falcelinta kaniisadda ee arimaha muhiimka, kuwaas oo ay ka mid tahay inuu ku dhiirrado arin sannado badan laga aamusnaa oo ah fadeexadda baadariyo caruur faro xumeeyey iyo sidoo kale musuqmaasuq maaliyadeed oo ka jira Vatican-ka.
Waxa kale oo ka mid ah go’aamada uu qaatay kuwo siyaasadeed oo uu ugu mudan yahay in uu ugu baaqay Shiinaha in uu joojiyo ‘dhibaataynta Muslimiinta Uigher” hadalladaas oo uu dhibsaday Shiinuhu ilaa heer wasaaradda arimaha dibaddu sheegtay in hadallada Pope-ku aanay ‘ahayn kuwo qaxiiqo ah’
Pope Francis wuxuu sannadkan ku soo gabogabeeyey inuu shaaciyey in uu booqasho taariikhi ah ku tagi doono Ciraaq bisha Maarij ee 2021, taas oo noqon doonta socdaalkiisa ugu horeeya ee uu kaga baxayo Vatican-ka tan iyo intii fayraska korona dunida ka dillaacay.
Previous articleMadaxweynaha Somaliland oo qaabilay wefti ka socda Xisbiga ANC
Next articleNin maydkiisa laga helay duleedka Laascaanood